Akekho uMai Tai, noVodka lapho amaJet American F22 Raptor Fighter Jets ejaha iRussia Air Force 300 miles ukusuka eHawaii
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Akekho uMai Tai, noVodka lapho amaJet American F22 Raptor Fighter Jets ejaha iRussia Air Force 300 miles ukusuka eHawaii
Izindaba Ezintsha • Izindaba zikaHulumeni • I-Russia Breaking News • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Inkulumo Yezokuvakasha • Izimfihlo Zokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezihlukahlukene
Izindiza ze-Raptor fighter zagadla phezu kwePacific
Ibhalwe ngu ULinda Hohnholz, umhleli we-eTN
Amajethi amathathu e-US F-22 Raptor athunyelwa ngeSonto, ngoJuni 13, 2021, ngaphezu kwePacific Ocean. Amajethi ethulwa eHickam Air Force Base yaseHawaii e-Oahu ukwethusa amaRussian Fighters kude nolwandle lwaseMelika eHawaii.
I-US Airforce ine-F-22 Raptor fighter jet. Yindiza yesizukulwane sesihlanu, kuze kube manje, ethathwa njengomuntu olwa kakhulu emhlabeni.
Lokhu okwehlukile kubeke isisekelo sezinye izindiza ezifanayo okufanele zilandelwe, iningi lokuqala lathola isikweletu salo:
I-F-22 ibe ngeyokuqala ukwethula ukubonakala kwe-radar ephansi, i-super-cruise, i-super-maneuverability, kanye namanethiwekhi wezinzwa eziphambili. I-F-22 ibinamandla okulwa nokulwa okungenakulinganiswa, yize ibingenawo amandla okudlala izindiza zakamuva zokulwa.
Ngesikhathi sokugcina le jet yayisebenza eHawaii ngoJuni 13 kulo nyaka iphendula ukucasulwa kwaseRussia ngamakhilomitha angama-300 ukusuka eWaikiki Beach.
I-F-22 Raptor yindiza entsha sha ye-Air Force. Ukuhlanganiswa kwayo kwe-stealth, supercruise, maneuverability, nama-avionics ahlanganisiwe, kuhlanganiswe nokusekelwa okuthuthukisiwe, kubonisa ukweqa okubonakalayo emandleni okulwa nempi.
I-Raptor yenza ohambweni lomoya nomoya kanye nomoya phansi. Intuthuko ephawulekayo ekwakhiweni kwamaphekula nokuhlanganiswa kwenzwa kuthuthukisa ukuqwashisa kwesimo somshayeli. Ekucushweni komoya kuya emoyeni, iRaptor ithwala ama-AMIMAM angu-AIM-120 ayisithupha nama-Sidewinders amabili we-AIM-9.
I-F-22 iletha ukukhohlakala osukwini, ikunike amandla hhayi kuphela ukuzivikela kepha nezinye izimpahla. Izinjini ze-F-22 zikhiqiza amandla amakhulu kunanoma iyiphi injini yamanje yokulwa.
Ukuhlanganiswa komklamo we-aerodynamic we-aerodynamic nokukhuphuka okwengeziwe kuvumela i-F-22 ukuthi ihambe ngezindiza zomoya (ezinkulu kune-1.5 Mach) ngaphandle kokusebenzisa i-afterburner - isici esaziwa njenge-supercruise.
Ukuqanjwa kwezindiza kwakungu-F / A-22 isikhashana ngaphambi kokuthi kuqanjwe kabusha i-F-22A ngoDisemba 2005.
Izikhulu zamasosha aseMelika zikuqinisekisile ukuthi abakwa-F-22 bahilizisana ngeSonto, ngoJuni 13 bephendula amabhomu aseRussia asondela eduze nendawo yasemoyeni yaseMelika. Yize izindiza zempi zaseRussia zingangenanga empeleni e-United States Air Space eHawaii. Amajethi aseMelika abuyela emuva kamuva.
Ekuqaleni, kwathiwa impendulo yamasosha yayicelwe yiFederal Aviation Administration (i-FAA) ukuba iqhube "ukugada ngendlela engafanele."
NgoJuni 13, 2 Raptors bethulwa yi-Indo-Pacific Command eCamp HM Smith kuya ngaphansi komyalo wayo, iPacific Air Forces, 154th Fighter Wing, evela eHickam esiqhingini sase-Oahu ngabo-4: 00 ntambama kwalandelwa umRaptor wesithathu mayelana ngemuva kwehora. Kubukeka sengathi i-KC-135 Stratotanker - indiza yokufaka uphethiloli - nayo isetshenzisiwe kulo mkhankaso, kukhomba ukuthi kungenzeka ukuthi ibhanoyi belidinga usizo lokufaka uphethiloli.
Udaba, okungekho ejensi, inkampani yezindiza, noma omele amasosha oluchaze kabanzi, lwaxazululwa futhi abakwa-3 Raptors kanye neKC-125 Stratotanker babuyela emuva esikhungweni seHickam Airforce esiQhingini sase-Oahu.
Ngesikhathi ebuzwa, okhulumela i-FAA u-Ian Gregor uthe, "Sisebenzisana kakhulu namasosha." I-Air Force inama-F-22s, abashayeli bezindiza, abalondolozi, kanye nabasebenzi bezikhali ababiza amahora angama-24 ngosuku eHickam ukuphendula izinsongo zomoya eziqhingini zaseHawaii njengengxenye yemishini yokuxwayisa ngokuvikela umoya.
Iqiniso lavela ezinsukwini kamuva lapho izinjini ezinkulu zokucinga zisusa imibuzo ezindatshaneni ezimboza lesi sehlakalo.
Okwenzeka ngempela ukuthi iRussia yayiqhube umsebenzi omkhulu kunayo yonke wasolwandle olwandle iPacific Ocean kusukela ngeMpi Yesibili Yomhlaba - mhlawumbe ukuvula indawo yomhlangano weBiden-Putin eGeneva. Lo msebenzi wenziwa kuphela ngamamayela angama-300 kuye kwangama-500 ukusuka emabhishi aseHawaii anelanga.
Esontweni eledlule iRussia yagadla indiza yempi iMiG-31 ukuba ihambisane nendiza yamasosha aseMelika idlula eBarents, kusho abezindaba zeRIA becaphuna isitatimende semikhumbi yempi yaseRussia.
Umbutho wamasosha aseRussia uthe ibhanoyi laseMelika likhonjwe njengebhanoyi iP-8A iPoseidon kwathi ibhanoyi laseRussia labuyiselwa endaweni yalo ngokushesha nje lapho indiza yaseMelika yenza u-U-turn yasuka emngceleni waseRussia, ngokusho kweRIA.
I-Barents Sea ilulwandle olungasemkhawulweni woLwandle i-Arctic, olusogwini olusenyakatho yeNorway neRussia futhi luhlukaniswe phakathi kwezindawo zamanzi aseNorway naseRussia,
Emuva ngo-2017, i-FAA icele indiza eyosekela isuka eHickam lapho kuthunyelwe khona ama-2 F-22s ukuba ayophelezela indiza ye-American Airlines esuka eCalifornia ngenxa yomgibeli obezama ukuphoqa ukuthi aye ngaphambili kwendiza. I-FBI ibambe umgibeli lapho efika.
Iphiko le-154th liyingxenye yeHawaii Air National Guard kepha isebenza ngokuqinile noMbutho Wezomoya futhi inikeza ukuphepha okuningi kweziqhingi. Inabashayeli bezindiza be-F-22 abashayela amahora angama-24 ngosuku eHickam ukuthola izimpendulo ezisheshayo ezingaba yingozi eziqhingini zaseHawaii.
Amayunithi amaningi ezindiza ezempi esifundeni sasePacific muva nje andise isikhathi sabo sokuqeqeshwa nokusebenza. I-Air Force isanda kuqala ukusabalalisa izindiza zayo ezungeze iPacific ngezindiza ezijwayelekile eziya ezikhumulweni zezindiza eziqhingini ezikude.